यस्ता छन् महिलाको वक्षस्थलसम्बन्धी रोचक तत्थ्यहरु ! – Click Khabar
यस्ता छन् महिलाको वक्षस्थलसम्बन्धी रोचक तत्थ्यहरु !
पुरूषहरू महिलाप्रति सहजरूपमा आकर्षित हुन्छन्। महिलाको वक्षस्थल अर्थात् स्तन भनेपछि प्रायः पुरूषहरु अत्ति रोमाञ्चक हुन्छन्। पुरूष मात्र होइन महिला आफैले पनि आफ्नो स्तनलाई महत्व दिएका हुन्छन्।
विभिन्न संस्थाले गरेको अध्ययनमा प्रायः पुरूषहरूको आँखा महिलाको स्तनमा पर्नेगर्छ। महिलाहरूको सौन्दर्यको एक अभिन्न अंग पनि हो, वक्षस्थल। वक्षस्थलको स्वरुपले महिलाको समग्र सुन्दरतामा प्रभाव पार्छ।
महिलाकाे वक्षस्थलसम्बन्धी केही तय्यहरू
–महिलाहरुको दुई वक्षस्थलमध्ये बायाँको वक्षस्थल दायाँभन्दा केही ठूलो हुने अध्ययनले देखाउँछ। दुई वक्षस्थल कहिल्यै पनि एउटै वा उत्रै साइजको हुँदैन।
स्तनको माथिल्लो भागलाई निप्पल भनिन्छ। यसको आकार पनि फरक फरक हुनेगर्छ, निप्पल पनि फरकफरक दिशा तर्फ मोडिएको हुन्छ। महिलाको वक्षस्थलको वरीपरी रौंहरू पनि हुने अध्ययनले बताएको छ। यद्यपी कतिपय महिलाहरूको राैं देखिन्न। महिलाको शरिरको रंग अनुसार नै स्तन वरपरको रंग फरक हुनेगर्छ।
–महिलाहरूको वक्षस्थलको तौल औसत ०.५ किलोग्राम हुन्छ। अध्ययनका अनुसार महिलाहरुको वक्षस्थलमा उनीहरुको शरिरमा हुने चिल्लो पदार्थमध्ये ४-५ प्रतिशत बोसो रहेको हुन्छ। महिलाको वक्षस्थल उमेर बढ्दै जाँदा बढ्दै जान्छ र बोसोको मात्रा पनि बढ्दै जान्छ।महिलाहरुले आफूलाई आकर्षण बढाउन आफनो वक्षस्थल सानो वा ठूलो बनाउने शल्यक्रियाहरू गर्ने गरेका छन्। विश्वका करिब २० लाख महिलाले आफ्नो वक्षस्थलको शल्यक्रिया गरी आकार परिवर्तन गरेका छन्। आफूलाई आकर्षक बनाउन या अरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्नका लागि उनीहरुले वक्षस्थलको शल्यक्रिया गर्ने गरेको बताइन्छ।
–महिलाहरूको वक्षस्थल सामान्य अवस्थामा भन्दा रिसाएको बेला ठुलो हुने अध्ययनकर्ताहरूको दावी छ। रिसाएको बेला महिलाको वक्षस्थल समेत फुक्नेगर्छ।
–हिड्दाहोस् या जगिङ गर्दा या कुनै काम गर्दा महिलाहरुको स्तन बढी नै उफ्रने गर्छ। यसले महिलाहरूको स्वास्थ्य समस्या थप उत्पन्न गराउन सक्ने बताइएको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार भित्री बस्त्रहरूको उपयुक्त प्रयोगले महिलालाई वक्षस्थलको दुखाई समस्यामा कमी ल्याउने तथा स्तनको साइज वा आकार उपयुक्त बनाउन मद्दत पुग्नेछ।
अनावश्यक थेप्चिने वा बढी मालिस गर्दा महिलाको वक्षस्थलको आकार बिग्रिन पनि सक्छ, यसर्थ आकारमा अाउने फरक परिवर्तनबाट बच्न सुत्ने बेलामा ध्यान दिनुपर्छ। सुतेको बेलामा निरन्तर एकै तरिकाले सुत्दा वक्षस्थल एकै स्थानमा थिचिने हुँदा सो थिचाइका कारण स्तन बिग्रिन सक्छ। सकेसम्म कोल्टे परेर सुत्ने गर्नुपर्छ। वक्षस्थलको तल लचिलो खाले कपडा राख्नु उत्तम हुनेछ। यससँगै स्तनको मालिसगर्दा बढी ध्यान दिन पनि जरूरी हुन्छ।
महिलाको अन्तरबस्त्र बिक्रि गर्ने कम्पनी इन्टीमेसीद्धारा गरिएको सर्भेअनुसार ४८ प्रतिशत महिलाहरु आफ्नो खास वक्षस्थलको साइजभन्दा १ वा २ इन्च ठूलो ब्रा लगाउँछन्। ८५ प्रतिशत महिलाले गलत साइजको ब्रा लगाउँछन्।
इन्टरनेशनल जर्नल अफ सेक्सुअल हेल्थको सर्भेक्षणअनुसार ७० प्रतिशत युवतीहरु आफ्नो वक्षस्थलको आकारबाट असन्तुष्ट छन्। सन् २००६ मा गरिएको एक सर्भेक्षणअनुसार ८२ प्रतिशत युवतीहरु वक्षस्थलको स्पर्शबाटै यौन सम्बन्धका लागि उत्तेजित हुने गर्छन्। गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डस् अनुसार विश्वमा सबैभन्दा ठूलो आकारको वक्षस्थल भएकी महिलाको ब्रेष्टको साइज ५.८३ फुट अर्थात् ७० इन्च छ।
सन् २०११ मा अमेरिकामा २ लाख ८६ जना जना महिलाले स्तनको शल्यक्रिया गरी आकार बढाएका छन्। क्यानडामा गरिएको शोधका अनुसार स्तन प्रत्यारोपण गराउने महिलाहरुमा आत्महत्या गर्ने जोखिम ७३ प्रतिशत बढि हुन्छ। साइकोलोजी टुडे पत्रिकाले गरेको सर्भेक्षणका अनुसार गरिब पुरुषहरुले ठूलो वक्षस्थल भएका महिलालाई मन पराउँछन् भने धनी पुरुषहरुले सानो वक्षस्थल भएका महिला रोज्छन्।
कुसुमखोलाका बिस्थापितलाई घर बनाईदिन प्रचण्डको निर्देशन
ओली समुह वाहेका स्थायी कमिटीको बैठक बालुवाटारमा सुरु
कोरोनाका कारण १७ जनाको मृत्यु